टिकटकमा वर्षा सिवाकोटीको पनि ईन्ट्री, अब उनको चाहिँ भ्यालु घट्ला कि बढ्ला ? - www.dthreeonline.com
टिकटकमा वर्षा सिवाकोटीको पनि ईन्ट्री, अब उनको चाहिँ भ्यालु घट्ला कि बढ्ला ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ०९, २०७७ समय: ११:३७:३३
ईटहरी/ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा चलेकै नाम हो वर्षा सिवाकोटी । उनले अभिनय गरेका धेरै फिल्मले व्यावसायिक सफलता हात नपारेपनि सामाजिक सञ्जालमा उनको निक्कै चर्चा हुने गर्छ । यतिबेला लकडाउनले घर भित्रै रहेकी उनी टिकटकमा ब्यस्त हुन थालेको देख्न सकिन्छ । तर यहि टिकटक कुनैबेला उनको ठुलै दुश्मन थियो । फिल्म वीर बिक्रम २ प्रदर्शनको नजिकिदै रहदा उनले टिकटकको बिरोध गर्दै एक स्टाटस समेत पोस्ट गरेकी थिइन् । प्रस्तुत माथिको स्टाटसमा उनले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने भन्दै आफ्नो आधिकारीक फेसबुकमा स्ट्याटस पोस्ट गरेकी थिइन् ।
उनले कलाकारको भ्यालु घटाउने टिकटक जस्ता अरु एपहरु पनि प्रतिबन्ध लगाइनु पर्ने र साथमा युट्युबमा राखिने लाज मर्दा कार्यक्रम पनि बन्द गरिनु पर्ने लेखेकी थिइन् । स्ट्याटस पोस्ट गरेको केहि समयमा नै वर्षालाई समर्थन गर्ने र उनको बिरोध गर्नेहरुको ठुलो जमातले कमेन्ट गरेका थिए तर उनले त्यो स्ट्याटस केही समयमै डिलिट गरिन् । यति मात्र हैन उनले केही समय अघि अर्थात यहि २०२० को अप्रिल २० मा एक पोस्ट गर्दै आफ्नो कुनै पनि अफिसियल ट्विटर र टिकटक एकाउन्ट नभएको भन्दै आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेकी थिइन् ।
उनले फेक एकाउन्ट बनाउने तथा पोस्ट गर्नेहरूलाई लकडाउन पछि कारबाही गर्ने समेत लेखेकी थिइन् । टिकटकमा अफिसियल एकाउन्ट नभएको बताउने उनको अब भने आधिकारिक एकाउन्ट पनि खडा भएको छ । उनले टिकटक सुरु गरेको एक हप्ता भएको छ । टिकटकलाई ब्यान्ड नै गर्नु पर्छ भन्दै बिरोधमा उत्रिने वर्षाको यतिवेला दिन काट्ने मेलो नै यहि बन्न पुगेको छ भन्दा फरक नपर्ला । उनले सुरु गरेको यो १ हप्ताको अबधिमा १८ ओटा भिडियोहरु पोस्ट गरेसकेकी छन् । अन्य कलाकारहरूले टिकटक प्रयोग गर्दा स्टार भ्यालु घटाउने भन्दै टाउको दुखाउने बर्षाको भ्यालु चाहिँ अब घट्छ कि बढ्छ त ? त्यो भने उनी नै जानुन ।
तर, छोटो अबधिमै उनी टिकटकमा भाईरल भने हुँदै गैरहेको देख्न सकिन्छ । उनले ३ जनालाई फलो गर्दा १५ हजारले यो अबधिमा उनलाई फलो गरिसकेका छन् भने १ लाख ४६ हजार बढिले उनको भिडियोमा लाईक बर्साएका छन् । उनका भिडियोले भ्युजहरु पनि राम्रै बटुलिरहेको छ । ‘नाई नभन्नु ल २’ फिल्मबाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेसंगै हालसम्म दर्जन भन्दा बढी फिल्ममा बर्षाले अभिनय गरीसकेकी छिन् । बन्दाबन्दीको कारण घरमा फुर्सदमा बसेकी उनले सामाजिक सन्जालहरुमा दैनिक आकर्षक तस्वीरहरु समेत सार्वजनिक गर्दै आएकी छिन् ।